July 13, 2021 Updated: July 15, 2021 9:43 a.m.
1of30A soldiers patrol at a shopping centre in Soweto, Johannesburg Tuesday July 13, 2021. South Africa's rioting continued Tuesday with the death toll rising to 32 as police and the military struggle to quell the violence in Gauteng and KwaZulu-Natal provinces. The violence started in various parts of KwaZulu-Natal last week when Zuma began serving a 15-month sentence for contempt of court.Themba Hadebe/APShow MoreShow Less
2of30Metro police take aim on people who took part in a protest, at a shopping centre in Soweto, near Johannesburg Tuesday July 13, 2021. South Africa's rioting continued Tuesday with the death toll rising to 32 as police and the military struggle to quell the violence in Gauteng and KwaZulu-Natal provinces. The violence started in various parts of KwaZulu-Natal last week when Zuma began serving a 15-month sentence for contempt of court.Themba Hadebe/APShow MoreShow Less
4of30Suspect looters are held at the Bara taxi rank shops in Soweto, Johannesburg, Monday, July 12, 2021. Police say six people are dead and more than 200 have been arrested amid escalating violence during rioting that broke out following the imprisonment of South Africa's former President Jacob Zuma.Ali Greeff/APShow MoreShow Less
5of30A security person aprehends looters inside a store in Vosloorus near Johannesburg, Tuesday July 13, 2021. South Africa's rioting continued Tuesday with the death toll rising to 32 as police and the military struggle to quell the violence in Gauteng and KwaZulu-Natal provinces. The violence started in various parts of KwaZulu-Natal last week when Zuma began serving a 15-month sentence for contempt of court.Themba Hadebe/APShow MoreShow Less
7of30Soldiers guard an autobahn at the Bara taxi rank shops in Soweto, Johannesburg, Monday, July 12, 2021. Police say six people are dead and more than 200 have been arrested amid escalating violence during rioting that broke out following the imprisonment of South Africa's former President Jacob Zuma.Ali Greeff/APShow MoreShow Less
8of30Soldiers patrol at a shopping centre in Soweto, Johannesburg Tuesday July 13, 2021. South Africa's rioting continued Tuesday with the death toll rising to 32 as police and the military struggle to quell the violence in Gauteng and KwaZulu-Natal provinces. The violence started in various parts of KwaZulu-Natal last week when Zuma began serving a 15-month sentence for contempt of court.Themba Hadebe/APShow MoreShow Less
10of30A security man takes aim at looters at a shopping centre in Soweto, Johannesburg, Tuesday July 13, 2021. South Africa's rioting continued Tuesday with the death toll rising to 32 as police and the military struggle to quell the violence in Gauteng and KwaZulu-Natal provinces. The violence started in various parts of KwaZulu-Natal last week when Zuma began serving a 15-month sentence for contempt of court.Themba Hadebe/APShow MoreShow Less
11of30A policeman watches over arrested looting suspects at a shopping centre, in Soweto near Johannesburg, Tuesday July 13, 2021 as ongoing looting and violence continues. South Africa's rioting continued Tuesday with the death toll rising to 32 as police and the military struggle to quell the violence in Gauteng and KwaZulu-Natal provinces. The violence started in various parts of KwaZulu-Natal last week when Zuma began serving a 15-month sentence for contempt of court.Ali Greeff/APShow MoreShow Less
13of30A patrolling soldier looks on at damaged stores at a shopping centre in Soweto near Johannesburg, Tuesday July 13, 2021 as ongoing looting and violence continues. South Africa's rioting continued Tuesday with the death toll rising to 32 as police and the military struggle to quell the violence in Gauteng and KwaZulu-Natal provinces. The violence started in various parts of KwaZulu-Natal last week when Zuma began serving a 15-month sentence for contempt of court.Themba Hadebe/APShow MoreShow Less
14of30A soldier apprehends a looters at a shopping centre in Soweto near Johannesburg, Tuesday July 13, 2021 as ongoing looting and violence continues. South Africa's rioting continued Tuesday with the death toll rising to 32 as police and the military struggle to quell the violence in Gauteng and KwaZulu-Natal provinces. The violence started in various parts of KwaZulu-Natal last week when Zuma began serving a 15-month sentence for contempt of court.Themba Hadebe/APShow MoreShow Less
16of30A road is barricaded in Soweto near Johannesburg, Tuesday July 13, 2021 as ongoing looting and violence continues. South Africa's rioting continued Tuesday with the death toll rising to 32 as police and the military struggle to quell the violence in Gauteng and KwaZulu-Natal provinces. The violence started in various parts of KwaZulu-Natal last week when Zuma began serving a 15-month sentence for contempt of court.Themba Hadebe/APShow MoreShow Less
17of30A policeman and soldier apprehend a looter at a shopping centre in Soweto, Johannesburg, Tuesday July 13, 2021. South Africa's rioting continued Tuesday with the death toll rising to 32 as police and the military struggle to quell the violence in Gauteng and KwaZulu-Natal provinces. The violence started in various parts of KwaZulu-Natal last week when Zuma began serving a 15-month sentence for contempt of court.Themba Hadebe/APShow MoreShow Less
19of30A security officer pursues looters at a shopping centre in Vosloorus near Johannesburg, Tuesday July 13, 2021. South Africa's rioting continued Tuesday with the death toll rising to 32 as police and the military struggle to quell the violence in Gauteng and KwaZulu-Natal provinces. The violence started in various parts of KwaZulu-Natal last week when Zuma began serving a 15-month sentence for contempt of court.Themba Hadebe/APShow MoreShow Less
20of30An elderly woman crosses a littered street caused by looters in Soweto near Johannesburg, Tuesday July 13, 2021 as ongoing looting and violence continues. South Africa's rioting continued Tuesday with the death toll rising to 32 as police and the military struggle to quell the violence in Gauteng and KwaZulu-Natal provinces. The violence started in various parts of KwaZulu-Natal last week when Zuma began serving a 15-month sentence for contempt of court.Themba Hadebe/APShow MoreShow Less
22of30Soldiers patrol at a shopping centre in Soweto, Johannesburg, Tuesday July 13, 2021. South Africa's rioting continued Tuesday with the death toll rising to 32 as police and the military struggle to quell the violence in Gauteng and KwaZulu-Natal provinces. The violence started in various parts of KwaZulu-Natal last week when Zuma began serving a 15-month sentence for contempt of court.Themba Hadebe/APShow MoreShow Less
23of30People make their way with good on a trolley from a store in Durban, South Africa, Tuesday July 13, 2021, as ongoing looting and violence continues. South Africa's rioting continued Tuesday with the death toll rising to 32 as police and the military struggle to quell the violence in Gauteng and KwaZulu-Natal provinces.APShow MoreShow Less
25of30People make their way from a shopping mall carrying goods in Durban, South Africa, Tuesday July 13, 2021, as ongoing looting and violence continues. South Africa's rioting continued Tuesday with the death toll rising to 32 as police and the military struggle to quell the violence in Gauteng and KwaZulu-Natal provinces.APShow MoreShow Less
26of30A man suspected of looting is arrested at a shopping mall in Soweto, near Johannesburg, Tuesday July 13, 2021. South Africa's rioting continued Tuesday as police and the military tried to halt the unrest in poor areas of two provinces, in Gauteng and KwaZulu-Natal, that began last week after the imprisonment of former President Jacob Zuma.Themba Hadebe/APShow MoreShow Less
28of30Soldiers escort a man suspected of looting from inside a trashed shopping mall in Soweto, near Johannesburg, Tuesday July 13, 2021. South Africa's rioting continued Tuesday as police and the military tried to halt the unrest in poor areas of two provinces, in Gauteng and KwaZulu-Natal, that began last week after the imprisonment of former President Jacob Zuma.Themba Hadebe/APShow MoreShow Less
29of30A metro officer dressed in plainclothes, pursues looters looters at a shopping centre in Soweto, Johannesburg, Tuesday July 13, 2021. South Africa's rioting continued Tuesday with the death toll rising to 32 as police and the military struggle to quell the violence in Gauteng and KwaZulu-Natal provinces. The violence started in various parts of KwaZulu-Natal last week when Zuma began serving a 15-month sentence for contempt of court.Themba Hadebe/APShow MoreShow Less